यस्तो कानुन कहिले बन्यो माननीय ज्यु ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
यस्तो कानुन कहिले बन्यो माननीय ज्यु !
सांसद मीना बुढाले सामाजिक सञ्जालमा समाचार शेयर गर्दा, धेरै अचम्ममा परे । उनले शेयर गरेको समाचार सामान्य थिएन । धेरै जना अकमक्क पनि भए । कोही भन्दै थिए : अहो नेपालमा यस्तोपनि कानुन बनेछ । लौ राम्रो भएछ । कोही, चुपचाप विधेयक ल्याएर पास पो गरेछन ।
सांसद बुढाले शेयर गरेको समाचार हो – भर्खरै आयो खुशीः अब नेपालमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय – जति सक्दो धेरै शेयर गरौं । समाचार देख्न बितिकै उनले फेसबुकमा शेयर गरिहालिन् । जनताको कानुन बनाउने तहमा पुगेका सांसदले नै यस्तो समाचार सामाजिक सञ्जालमा बाँडेपछि, कस्लाई बिस्वास नलाग्ने । तर उनले शेयरको बिषय बेला–बेला बहसमा आएपनि, अहिलेसम्म कानुनकै रुपमा पारित भएको छैन ।
यी सांसदलाई समेत थाहा रहेनछ कि, सांसदमा कस्ता–कस्ता कानुन बन्छन् । अहिले सम्म के उनले कानुन बनाउने बहसमा भाग लिएकी छैनन् । हुनत अहिले सम्म सभामा एकपटक पनि बोलेको रेकर्ड उनको नाममा नभएको संसद सचिवालयले बताएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरु नै यस्ता भएपछि कसरी हुन्छ, देशको बिकास र कसरी बन्छन् –कानुन ।